Quruxda Armani waxay ku dhawaaqday waji qurux cusub
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Quruxda Armani waxay ku dhawaaqday waji qurux cusub
Quruxda Armani ayaa ku dhawaaqday atariishada Maraykanka ah Tessa Thompson inay tahay wejiga ugu cusub. Thompson wuxuu ka soo muuqan doonaa labada olole ee aasaaska caanka ah ee Luminous Silk Foundation iyo awoodda dibnaha cusub, oo uu toogtay sawir qaade Iswidhish Mikael Jansson.
Luminous Silk Foundation waxaa loo yaqaanaa inay tahay muujintii ugu horreysay ee falsafada Armani ee ku dhammaystirka midabka taabashada ugu fudud, waxayna la timaaddaa noocyo kala duwan oo gaaraya 40 midab, oo ku habboon midab kasta oo maqaarka ah. AWOODDA FARUURTA waa lipstick satin dheere ah oo lagu sameeyay difaac, saliid raaxo leh iyo midabyo aad u sarreeya si ay u keenaan midab cad oo leh dhar-xidhasho maalinta oo dhan ah, raaxo iyo dareemo fudud. Xabaddeeda hal-abuurka leh ee qaab-dhicida waxay u oggolaanaysaa fududaynta adeegsiga iyo khadadka qeexan ee saxda ah.
"Fikradayda quruxda waxay quseysaa haweeney kasta maadaama ay kor u qaadayso shaqsiyadeeda iyo gaarnimada. Tessa Thompson waxay igu dhufatay tamarta ifaysa ee ay soo baxayso, degenaanshaha firfircoon ee habkeeda. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan awoodo inaan la shaqeeyo iyada oo aan muujiyo waji cusub oo kaleidoscope dhedig ee quruxda Armani", ayuu yidhi Giorgio Armani.
Tessa Thompson ayaa intaa ku dartay: "Fikradahayada ku xeeran waxa quruxda badan, dhaqan ahaan, way isbedelayaan, oo noqonayaan kuwo la isku dhexgaro. Waxa aan ka jeclahay Armani waa habka ay u awood siiso nooc kasta oo haween ah inay dareento nafteeda ugu fiican. "
Thompson, oo ku dhalatay Los Angeles, waxay bilawday masraxa ka dibna waxay doorar yar ku lahayd telefishanka ka hor intaysan magaceeda samaynin filimka. Doorkeedii ugu horreeyay ee la xusi karo, doorkeeda filimka dillaacay wuxuu ahaa "Dadka Cadaanka ah ee qaaliga ah" 2014, ka dibna waxaa ku xigay filimka Ava DuVernay ee 2014 "Selma". Thompson waxa kale oo ay caan ku tahay doorkeeda taxanaha riwaayadaha ee Emmy magacaabay ee "Westworld". 2015, Thompson waxa uu jilay "Creed" wuxuuna dib u soo celiyay doorkeeda "Creed II" ee Noofambar 2018. Thompson hadda waxay ku jirtaa wax soo saarka Creed III. Thompson wuxuu ku ciyaaray Valkyrie filimka Marvel ee "Thor: Ragnarok" 2017, oo ay ku xigto "Avengers: Endgame" 2019, wuxuuna dib u celin doonaa doorka soo socda "Thor: Love and Thunder", oo loo dejiyay sii deynta 2022. 2019, Thompson wuxuu ka soo muuqday jaldiga joornaalka TIME isagoo ah Hogaamiyihii Jiilka soo socda. Sannadkii 2020, Thompson waxa ay wax ka jishay filimka "Jacaylka Sylvie", kaas oo ay iyaduna soo saartay. Thompson waxay dhowaan ku guulaysatay abaal-marin doorkeeda Irene Redfield ee filimka Rebecca Hall ee 1920-meeyadii ee “Passing,” oo la sii daayay Noofambar 2021 Netflix. Filimku waa laqabsiga Nella Larsen's 1920-meeyadii Harlem Renaissance novel kaasoo sahaminaya dhaqanka gudbinta jinsiyadda. Shaqadeeda jilitaanka ka sokow, 2021, Thompson waxay furtay shirkaddeeda wax soo saarka, Viva Maude, taas oo ay la saxeexatay heshiis muuqaal ah HBO/HBO Max, iyada oo ka bilaabaysa buugga si ay u eegto laqabsiga "Nolosha Qarsoon ee Haweenka Kaniisadda" iyo " Yaa Geeri Ka Cabsada.” Intaa waxaa dheer, Thompson wuxuu abuuray oo soo saari doonaa taxanaha dukumeenti ee Hulu ee cinwaankiisu yahay "Hadal halxiraale," oo hadda ku jira horumar.
Tessa Thompson waxay ku biirtay quruxda Armani oo ay weheliso atariishooyinka Cate Blanchett, Zhong Chuxi, Adria Arjona, Alice Pagani, iyo Greta Ferro; jilayaasha Ryan Reynolds, Jackson Yee, iyo Nicholas Hoult; iyo moodooyinka Barbara Palvin, Madisin Rian iyo Valentina Sampaio. Mid kasta oo ka mid ah wejiga quruxda Armani, qaabkooda gaarka ah, waxay ku biiraan aragtida Giorgio Armani ee quruxda.
Ganacsade Shiinees ah oo ku sugan Tonga ayaa ka warbixiyay xaaladda jasiiradda hadda
Saamaynta Faafida ee Maskaxda Carruurta
Suuqa Daawada Nitroglycerin ayaa la filayaa...
Tirada safarrada caalamiga ah ee taga iyo ka imanaysa Maraykanka ayaa sare u kacday...
Barnaamijyada duulista joogtada ah waxay kordhiyaan qiimaha ganacsiga...
Safarka hawada ee Bariga Afrika ayaa dhaafi doona ka hor inta uusan faafin...
Hawl-wadeennada dalxiiska Tansaaniya waxay kor u qaadaan dalxiiska ee New York...